Carton Box Production - Ngwe Pinlae Livestock Breedings & Fisheries Co.,Ltd.
/ Carton Box Production
It is situated in ‘Ngwe Pinlae’ Marine Industrial Zone, Hlaingtharyar Township, Yangon Region. Its modern machinery can produce paper carton boxes of all sizes that are colourfully printed with5colours printers to meet the customers’ taste.
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ငွေပင်လယ် ရေလုပ်ငန်း စက်မှုဇုန် တွင် တည်ရှိပါသည်။ ခေတ်မီ စက်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ကာ လှိုင်တွန့်စက္ကူဘူး မျိုးစုံ၊ အရွယ်အစား မျိုးစုံအား ရောင်စုံရိုက်နှိပ်အသုံးပြုပြီး လုပ်ငန်းအပ်နှံသူ စိတ်တိုင်းကျ ထုတ်လုပ်ကာ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
Carton Box Production Gallery